आइपीएलमा धोनी हिट विराट फ्लप सन्दीप बन्लान त इमर्जिङ स्टार ? - Solududhkunda Online
आइपीएलमा धोनी हिट विराट फ्लप सन्दीप बन्लान त इमर्जिङ स्टार ?
- 2019 April 17 मा प्रकाशित
एजेन्सी । विश्वका क्रिकेट समर्थकको ध्यान तान्न सफल इन्डियन प्रिमिएर लिग (आइपीएल)को १२ औं संस्करणका खेल जारी छन ।
विभिन्न आठ फ्रेन्चाइज् सहभागी टोलीमा विभिन्न देशका स्टार खेलाडी पनि सहभागी छन् । नेपालका युवा लेगस्पीनर सन्दीप लामिछानेले दिल्ली क्यापिटल्सको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । एसोसीएट राष्ट्रबाट आइपीएल खेल्ने सन्दीप एकमात्र खेलाडी हुन् ।
सन्दीपकै सहभागीताका कारण नेपालमा पनि आइपीएलबारे चासो र चर्चा छ । सन्दीप आइपीएलको इमर्जिङ स्टारको मनोनयनमा परेका छन् । अनलाइन भोटिङ पोलमा सन्दीपले अग्रता लिएका छन् । प्रत्येक टोलीले आठौं खेल खेलीसक्दा तीन टोलीका कप्तान कारबाहीमा परेका छन् ।
सालिन क्रिकेटरको पहिचान बनाएका चेन्नई सुपर किङ्‍सका कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी, मुम्बइ इन्डियसका कप्तान रोहित शर्मा र रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोरका कप्तान विराट कोहली कारबाहीमा परेका हुन् । रोहित र विराट सुस्त बलिङ गरेपछि कारबाहीमा परेका हुन् भने महेन्द्रसिंह धोनी अम्पाएरसँगको विवादमा मैदान प्रवेशपछि आइपीएलको कारबाहीमा परे ।
महेन्द्रसिंह धोनीको टोली आठौं खेल सकिँदासम्म शीर्ष स्थानमा छ । चेन्नईले १ खेलमा मात्र हार व्यहोरेको छ । अर्को रोचक कुरा भारतीय टोलीका कप्तान विराट कोहलीको टोली रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोरले अहिलेसम्म १ खेलमा मात्र जित निकालेको छ । ८ खेलमध्ये १ मा मात्र जित निकालेको बैंग्लोर २ अंकसहित पुछारमा छ ।
लगातारको हारपछि कोहलीको आचोलना पनि भयो । चमत्कारीक प्रर्दशनले मात्रै विराटको बैंग्लोरलाई प्लेअपमा पुगाउनेछ । क्रिकेट विश्लेषकले धोनी ‘हिट’ विराट ‘फ्लप’को संज्ञा समेत दिन थालेका छन् । रोहितको टोली मुम्बइ इन्डियन्स सम्मानजनक अवस्थामा छ । ५ खेलमा जित र ३ मा पराजय भोगेको मुम्बइ १० अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ ।
सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी
बल टेम्परिङको कारबाहीमा परेपछि गत सिजनको आइपीएल खेल्न नपाएका अष्ट्रेलियाका स्टार खेलाडी डेबिड वार्नर यो सिजनको ७ खेलसम्म सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको शीर्षस्थानमा छन् । हैदरावाद बुधबार चेन्नईसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । उनले ७ औं खेलसम्म ४ सय रन बनाएका छन् । वार्नरले एक शतक र ४ अर्धशतक बनाएका बनाएका छन् । उनले ३४ चौका र १२ छक्का प्रहार गरेका छन् ।
किङ्स-११ पन्जाबमा आवद्ध केएल राहुलले आइपीएलको यो सिजनमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरीरहेका छन् । पन्जाबले ९ खेल खेलिसक्दा राहुल सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको दोस्रो नम्बरमा छन् । १ शतक र ४ अर्धशतक बनाएका राहुलले ३ सय ८७ रन बनाएका छन् । ३० चौका र १३ छक्का उनले प्रहार गरेका छन् । उनका टोली ९ खेलमा ५ मा जित र ४ मा हारसहित १० अंकका साथ चौंथो स्थानमा छ ।
वेष्ट इन्डिजका क्रिस गेल आइपीएलमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको तेस्रो नम्बरमा छन् । किङ्स-११ पन्जाबमा आबद्ध क्रिसले ९ खेलको समाप्तीसम्म ३ सय ५२ रन बनाएका छन् । ३ अर्धशतक बनाएका उनले ३० चौका र २६ छक्का प्रहार गरेका छन् ।
कोलकता नाइट राइर्डसको जितमा नायक बन्दै आइरहेका वेष्ट इन्डिजका आन्दे रसेल सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको चौथो नम्बरमा छन् । उनले आइपीएलको यो सिजनमा कोलकताको जितमा विस्फोटक ब्याटिङ गरिरहेका छन् । उनले कोलकताको ८ औं खेलसम्म ३ सय १२ रन बनाएका छन् । २ अर्धशतक बनाएका उनले समग्रमा २१ चौका र ३० छक्का प्रहार गरेका छन् । कोलकता ६ अंकसहित ६ औं स्थानमा छ ।
राजस्थान रोयल्सबाट आइपीएल खेलिरहेका इंग्ल्याण्डका जोस बट्लर जारी सिजनको आठौं खेल सकिँदासम्म सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको पाँचौं स्थानमा छन् । ३ सय ११ रन बनाएका उनी ३ अर्धशतक बनाएका छन् । उनले ३८ चौका र १४ छक्का प्रहार गरेका छन् । उनको टोली राजस्थान २ खेलमा जित निकाल्दै ४ अंकसहित पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ।
दक्षिण अफ्रिकाका २५ वर्षीय कागिसो रबडाले जारी आइपीएलमा शानदार प्रदर्शन गरीरहेका छन् । दिल्ली क्यापिटल्सबाट खेलिरहेका उनी आठौं खेल सकिँदासम्म सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको शीर्ष स्थानमा छन् । ३१ ओभर बलिङ गर्दै २ सय ३९ रन खर्चिएका रबडाले १७ विकेट लिएका छन् ।
दक्षिण अफ्रिकाका इमरान ताहिरले पनि आइपीएलको यो सिजनमा उत्कृष्ट बलिङ गरीरहेका छन् । शीर्षस्थानमा रहेको चेन्नई सुपर किङसमा आबद्ध इमरानले आठौं खेलसकिँदा सम्म १३ विकेट लिएका छन् । ३० ओभर बलिङ गरेका उनले १ मेडन राख्दै १ सय ७३ रा खर्चिएर १३ विकेट लिएका हुन् ।
रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोरले खराब प्रदर्शन गरेपनि युजभेन्द्र चहालले जारी आएपीएलमा १३ विकेट लिएका छन् । भारतीय टोलीका बलर युजेभेन्द्रले ३२ ओभर बलिङ गर्दै १ मेडन राख्दै सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको तेस्रो नम्बरमा छन् । उनले २ सय २५ रन खर्चिएका छन् ।
किङ्स-११ पज्जाबका बलर मोहमद शमी सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको चौंथो नम्बरमा छन् । ९ खेलको समाप्तीसम्म शमीले १२ विकेट लिएका छन् । उनले ३ सय २७ रन खर्चिएका छन् ।
दक्षिण अफ्रिकाका क्रिस मोरीसले जारी आइपीएलमा ११ विकेट लिएका छन् । दिल्ली क्यापिटल्समा आबद्ध मोरीसले दिल्लीले ८ खेलेपनि ६ खेलमा मात्र प्लेइङ-११ मा स्थान बनाएका छन् । ६ खेलमा उनले ११ विकेट लिएका हुन् । २२ ओभर बलिङ गरेका मोरीसले १ सय ७९ रन खर्चिएका छन् ।
सनराइजर्स हैदरावादमा आबद्ध २३ वर्षीय दिपक होडाले आइपीएलमा १० क्याच गरेका छन् । ६ खेलमा स्थान बनाएका उनले १० क्याच गरेका हुन् ।
किङ्स-११ पन्जाबमा आबद्ध दक्षिण अफ्रिकाका डेभिड मिलरले ७ क्याच गरेका छन् । ७ औं खेल खेलका उनले ७ वटा क्याच गरेका छन् ।
चेन्नई सुपर किङसका महत्वपूर्ण खेलाडी रबिन्द्र जडेजाले जारी आइपीएलमा ७ क्याच गरेका छन् । ८ औं खेलको समाप्तीसम्म उनी ७ क्याच गर्न सफल भएका छन् ।
मुम्बइ इन्डियन्सका हार्दिक पाण्डेयले जारी आइपीएलमा ७ क्याच गरेका छन् । ८ औं खेल सकिँदासम्म उनी सर्वाधिक क्याच गर्ने खेलाडीको चौथो नम्बरमा छन् ।